I-Tafrica House: ukuhamba ngezinyawo okungaphezu kwamamitha angu-250 ukuya olwandle
I-ikhaya eliyindawo yokuhlala ephelele ibungazwe ngu-Al
I-Tafrica iyikhaya lasogwini elinethezekile, eliphakathi kwebanga elilula lokuhamba ukusuka e-Home and Cylinder Beaches, izitolo nezindawo zokudlela okuhlanganisa ne-Straddie Hotel. Kunguhambo lwemizuzu emi-4 noma uhambo lwamaminithi angu-20 (ukubukwa okuhle kolwandle okudlule) ukuze ufinyelele i-Point Lookout Gorge Walk edumile. I-Tafrica ibuyela emhosheni wehlathi kanye nomfudlana, okusho ukuthi sinezivakashi ezivamile ngemuva kwendlu (ama-kangaroo nama-koala, ama-sugar glider nokunye). Kungalesi sizathu asikwazi ukusingatha izilwane ezifuywayo e-Tafrica.
I-Tafrica inendawo enkulu yokuhlala / yokudlela enomoya, efinyelela kuvulandi omkhulu. Indlu ingenwa ngezitebhisi eziya kuvulandi. Kukhona isango elivikelekile phezulu ezitebhisini, elizofika kahle uma kuhlezi izingane ezincane.
Indlu izungezwe izingadi zomdabu futhi ingemuva endaweni yokulondoloza ihlathi.
Kukhona indawo yokupaka ehlanganisiwe etholakala ngaphansi kwendlu kanye nezindawo zokupaka ezingaphandle komgwaqo ku-driveway.
Indlu ayakhelwe izivakashi ezingaphezu kwezi-5 futhi ayifanele amaphathi noma imibuthano emikhulu. Sinobudlelwano obuhle kakhulu nomakhelwane bethu, futhi sithemba ukuthi uzolihlonipha ilungelo labo lokujabulela amakhaya abo nomakhelwane ngaphandle kokuhlangabezana nomsindo owedlulele noma umculo.
I-Tafrica iyikhaya lasogwini elinethezekile, eliphakathi kwebanga lokuhamba kalula le-Home and Cylinder Beaches, izitolo nezindawo zokudlela ezihlanganisa i-Straddie Hotel kanye ne-Kokomo. Indawo okuyo iyenza ibe yisisekelo esihle sokuhlola konke okuhlinzekwa yimvelo yangasese ye-NSI.
I-Tafrica ibuyela emseleni wehlathi kanye nomfudlana, okusho ukuthi sinezivakashi njalo ngemva kwendlu (ama-kangaroo nama-koala, ama-sugar glider, ama-echidna nokunye). Ukuvuka ulalele ukuhlabelela kwezinyoni ngezinye izikhathi kuphazanyiswa izingcingo ze-koala (okuthusa kakhulu uma ungakaze ukuzwe ngaphambili!). Kungalesi sizathu ukuthi singabambisi izilwane ezifuywayo e-Tafrica.
Kunendawo eningi yokuthi izingane zidlale egcekeni elingemuva, kanye nendawo yokuthola indawo enokuthula yokuphumula phakathi kohlaza noma kuvulandi. Kukhona i-Hills Hoist enkulu endala ngemuva, eduze kwepayipi, eyenza ukususwa kwesihlabathi sasogwini nosawoti emabhodini okubhukuda nasemzimbeni kube lula, ngaphambi kokuphumula kuvulandi. Uma kufanele uhlangabezane nosuku lwemvula, kukhona ukukhethwa kwemidlalo yebhodi nama-dvd atholakalayo. Sicela uqaphele ukuthi umabona kude usebenzisa uxhumano lwe-inthanethi ngokuphelele (akukho ukwamukela kothi). Kunokufinyelela kuzinhlelo zokusebenza ezivamile zamashaneli angena emoyeni (okuhlanganisa ne-tv ebukhoma) futhi uyakwazi ukusebenzisa ukungena kwakho ngemvume ukuze usakaze izinhlelo zokusebenza; I-netflix, i-Stan, i-Disney, i-binge.
Sicela uqaphele ukuthi abahlinzeki besevisi yeselula abasebenzisa inethiwekhi ye-Optus bangase babe nokutholakala okulinganiselwe esiqhingini. Kunokuxhumana okuhle kwenethiwekhi nabahlinzeki abasebenzisa inethiwekhi ye-Telstra.
Siyamthanda uStraddie kanye nomjondolo wethu omncane, futhi sithemba ukuthi nawe uzokwenza! Sifuna ube neholide elihle, ngakho-ke ngitholakala 24/7 kuselula yami uma unezinkinga. Uma ngingekho esiqhingini, nginomndeni nabangane endaweni abangasiza futhi.
Siyamthanda uStraddie kanye nomjondolo wethu omncane, futhi sithemba ukuthi nawe uzokwenza! Sifuna ube neholide elihle, ngakho-ke ngitholakala 24/7 kuselula yami uma unezinkinga. U…
Idiphozithi Yesibambiso - uma ulimaza ikhaya, kungenzeka ukhokhiswe imali efikela ku-$1064.